Gbasara Anyị - Yantai Stamina Mining Equipment Co., Ltd.
Yantai Stamina Mining Equipment Co., Ltd nke e guzobere n'afọ 2009, nke dị na Yantai, Shandong, obodo windo mepere emepe na China.
Yantai bụ obodo mara mma ma na-eto eto, ebe a anyị nwere ngwongwo zuru ezu, okporo ụzọ mepụtara, ọdụ ụgbọ mmiri Yantai na ọdụ ụgbọ mmiri Qingdao dị mfe maka mbupu ya n'akụkụ ụwa niile. Anyi nọ na mpaghara ahia efu (FTA), gọọmentị na-enye ọtụtụ amụma amụma iji kwado mbupụ.
Anyị centrifuge nkata mbupụ ná mba ọzọ n'ọtụtụ mpaghara na mba, na ala na-eri na a pụrụ ịdabere na àgwà. Anyị nkenke sieve efere na nkata centrifuge bụ nke 304/316 SS wedge waya, na arụmọrụ zuru oke na nguzogide corrosion, nkwụsị abrasion, arụmọrụ na-asa ọkụ na ndụ.
Igwe magnet na VIBRATING BANANA SCREEN bụkwa ngwaahịa anyị nkịtị, ha niile nwere ike ịhazi.
Anyị enweela ndị ọkachamara ịgbado ọkụ nke maara nke ọma na ọkọlọtọ mba (DIN ọkọlọtọ, AS ọkọlọtọ / JIS ọkọlọtọ / ọkọlọtọ ISO ...), yana usoro nyocha nyocha nke ọkachamara.
Anyị nwere ụdị ọrụ akụrụngwa dị ka igwe akụrụngwa akụrụngwa, akụrụngwa akụrụngwa, igwe igwe, igwe na ihe ndozi, yana oke arụmọrụ na nkenke.
Nka na ụzụ otu bụ anyị kachasi mkpa, anyị injinia na-ọma ahụmahụ, na elu imewe larịị na ike nke nsogbu nsogbu.
Mgbe ihe karịrị afọ 10 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, Stamina guzosie ike mmekorita ya na ọtụtụ mba ọzọ na ụlọ ọrụ ndị na Germany, Australia, USA ， Mongolia na na. Anyị ngwaahịa na-agụghị nnyocha ka ọtụtụ ahịa.With anyị ahụmahụ ndị ọkachamara, ọkachamara àgwà akara usoro, zuru nnyocha ngwá, elu nkenke nhazi akụrụngwa na zuru okè mgbe-ire ọrụ usoro, anyị maa hụ na ndị ahịa anyị nwere ike inweta ihe kacha mma ngwaahịa na ọrụ si Ume.